By ဧရာဝတီ2April 2013
ပြီးခဲ့တဲ့ မတ်လအတွင်းမှာ ဖြစ်ခဲ့တဲ့ မိတ္ထီလာမြို့က ဈေးရောင်းဈေးဝယ် ပြဿနာ အစကနေ ဘာသာရေး အဓိကရုဏ်း ပုံစံ ပြောင်းလဲခဲ့ပြီး ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ အခြေအနေကို သက်ဆိုင်ရာ အာဏာပိုင်တွေက ချက်ချင်း မထိန်းသိမ်းနိုင်ခဲ့ပါဘူး။ အဲဒီလို မထိန်းသိမ်းနိုင်ခဲ့တာကြောင့် မိတ္ထီလာမြို့မှာ ရက်ကွက်တွေ၊ ဘာသာရေး အဆောက်အအုံတွေ မီးလောင် ပျက်စီးခဲ့ရပြီး လူ ၄၀ ကျော် သေဆုံးခဲ့ကာ သောင်းနဲ့ချီ အိုးအိမ်မဲ့ဘဝ ဒုက္ခသည် အခြေအနေကို ရောက်ခဲ့ပါတယ်။
အဓိကရုဏ်းတွေက မိတ္ထီလာ တမြို့တည်းတင် မကဘဲ ပဲခူးတိုင်းအထိ ပျံ့နှံ့ခဲ့တာကြောင့် ဒေသ တော်တော်များများကို ပုဒ်မ ၁၄၄ ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သလို ရန်ကုန်လို မြို့ကြီးနဲ့ အနီးတဝိုက်မှာလည်း အဲဒီကာလက ဈေးဆိုင်တွေကို ည ၉ နာရီ နောက်ဆုံးထား ပိတ်သိမ်းဖို့ ထုတ်ပြန်ခဲ့ရပါတယ်။
ဖြစ်သွားခဲ့တဲ့ အရေးအခင်းတွေကို ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင် ဘယ်ဘာသာ၊ ဘယ်လူမျိုး ဆိုတာထက် အစွန်းရောက် လူတစုရဲ့ ဖျက်လိုဖျက်ဆီး လုပ်ရပ်တွေဆိုတာ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း မြင်တွေ့ကြရပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
ဖျက်ဆီးလိုတဲ့ အဲဒီလူတစုရဲ့ နောက်ကွယ်မှာ ကြိုးကိုင်နေသူ တချို့ ရှိနိုင်တယ်လို့လည်း သုံးသပ်သူတွေ ရှိနေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်လို့ နောက်ကွယ်က ကြိုးကိုင်သူတွေ မဆိုထားနဲ့ ဆူပူလှုံ့ဆော်မှုကို ဖန်တီးသူတွေ၊ မီးရှို့ဖျက်ဆီးသွားသူတွေကိုေတောင် တိတိကျကျ ဖော်ထုတ်နိုင်ပြီဆိုတာ မကြားရသေးပါဘူး။
ပဋိပက္ခ ဖြစ်စဉ်တွေမှာ လုံခြံရေး ထိမ်းသိမ်းဖို့ ရောက်ရှိလာတဲ့ ရဲတပ်ဖွဲ့အနေနဲ့ အခြေအနေကို ထိရောက်စွာ မထိန်းနိုင်တာ၊ အထက်ကို အဆင့်ဆင့် အစီရင်ခံပြီး ညွှန်ကြားချက် တောင်းနေရတာနဲ့ အချိန်လင့်ကုန်တာ၊ ဆူပူဖျက်ဆီးသူတွေကို ဒီအတိုင်းရပ်ကြည့်နေရတာတွေကို ထောက်ပြဝေဖန်မှုတွေ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေးကို ဖော်ဆောင်မယ့် တာဝန်ရှိသူတွေအနေနဲ့ ပဋိပက္ခတခုကို ထိခိုက်မှု အနည်းဆုံးဖြစ်အောင် ထိန်းသိမ်းနိုင်စွမ်း မရှိသေးတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ထို့အတူ ပဋိပက္ခ ဖြစ်ပွားပြီး နောက်မှာလည်း တကယ့် လက်သည် တရားခံကို ဖမ်းမိနိုင်အောင် အားကောင်းတဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေကို မမြင်ရသေးပါဘူး။
သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်ကတော့ သူ့ရဲ့ မိန့်ခွန်းထဲမှာ ဆူပူမှုတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ ဖြေရှင်းရာမှာ လိုအပ်ရင် တပ်မတော်ရဲ့ အကူအညီကို ရယူသွားမယ်လို့ ပြောပါတယ်။
တိုင်းပြည် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးနဲ့ ဒီမိုကရေစီ အရေးကို ဖော်ဆောင်နေချိန်ဖြစ်တဲ့ အခုလိုကာလမှာ ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ ဆူပူမှုတွေဟာ တိုက်ဆိုင်မှုလို့ ထင်ပါသလား ….
နောက်ကြောင်းပြန်လှည့်ချင်သူ တချို့ရဲ့ နောက်ကွယ်က ကြိုးကိုင်မှုတွေ ရှိနိုင်လား ….
လက်ပန်းတောင်းတောင် သပိတ်စခန်းမှာ ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒပြနေသူတွေကို ဖြိုခွင်းရာမှာတောင် လက်နက်တွေ သုံးခဲ့တဲ့ရဲတွေဟာ မိတ္ထီလာမြို့ မီးဟုန်းဟုန်း တောက်လောင်ပြီး သတ်ဖြတ်နေကြချိန်မှာ ဆူပူသူတွေကို ဘာကြောင့် အင်အားသုံးဖြိုခွင်းမှု မပြုတာလဲ ….
ပဲခူးတိုင်းအထိ ပြန့်လာတဲ့ ဆူပူမှု၊ အကြမ်းဖက်မှုတွေကို ထိမ်းသိမ်းရာမှာ လက်ဦးမှု မရှိခဲ့တာတွေ၊ အားနည်းချက်တွေ ရှိနေခဲ့တဲ့အပေါ် ဘယ်လို မြင်ကြသလဲ ….
နောက်ကွယ်က ကြိုးကိုင်သူတွေကို ဖမ်းမမိတာဟာ အဲဒီလူတွေထဲမှာ တရားဥပဒေ စိုးမိုးမှုဆိုတာနဲ့ မသက်ဆိုင်သူတွေ ပါနေလို့လား …. စတာတွေကို ဒီတပတ် ဧရာဝတီ ဖိုရမ်မှာ ဝင်ရောက် ဆွေးနွေးဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။